mairie-antananarivo – Famaranana ny fankalazana ny 8 martsa ny CUA
Famaranana ny fankalazana ny 8 martsa ny CUA
administrateur 13 martsa 2018 Commentaires fermés
Fanolorana loka ho an’ireo tarika mendrika teo amin’ny fifaninanana ara-panatanjahantena natao teny anivon’ny Boriboritany teto Antananarivo Renivohitra, no namaranana ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny vehivavy nataon’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA), niaraka tamin’ny mpiara-miombon’antoka aminy toy ny UNICEF, sy ny maro hafa,… androany sabotsy maraina teo.
Namarana izany tamin’ny fomba ofisialy, nisolotena ny Ben’ny tanàna, Lalao Ravalomanana, ny lefitra faharoan’ny ben’ny tanàna, Julien Andriamorasata; teo koa ny tale misahana ny asa sosialy ao amin’ny CUA, Dr Prisca Andriantseheno; ny tale misahana ny kolontsaina sy ny fiainam-piaraha-monina ao amin’ny CUA, Patrick Andriamisa Ramihone, sy ny solontena avy amin’ny UNICEF.
Nisongadina tamin’izany fa Antananarivo Renivohitra dia mikatsaka hatrany ny soa iombonan’ny Malagasy, indrindra ny vehivavy sy ny ankizy. Ankoatra izany, mbola mitohy hatramin’ny anio sabotsy tolakandro ny fampirantiana momba ny asa vitan’ny fikambanam-behivavy samihafa eto an-drenivohitra, etsy amin’ny Lapan’ny tanàna Analakely.